बजेट धारणा - Arthakoartha.com
बजेटको आकार अस्वाभाविक बढाइनु हुँदैन : डा. खतिवडा, अर्थतन्त्र उकास्ने बजेट ल्याइनुपर्छ : डा. महत (भिडियो सामग्री)
२ जेष्ठ २०७९, सोमबार ००:१३ अर्थकोअर्थ
आगामी बजेट कृृषि केन्द्रित हुनुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री महराको सुझाब
२८ बैशाख २०७९, बुधबार ०६:१५ अर्थकोअर्थ
काठमाडौं, २८ वैशाख । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने कामलाई तीव्र बनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १७ खर्ब ४५ अर्बको सिलिङलाई आधार मानेर मन्त्रालयले बजेट बनाउन थालेको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासको लागि आगामी बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले जोड दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता […]
नीति तथा कार्यक्रमको जिम्मा अर्थलाई
२७ बैशाख २०७९, मंगलवार ०२:१२ अर्थकोअर्थ
काठमाडौं, २७ वैशाख । यसपटक आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम बनाउने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयलाई आइलागेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालेनै नीति तथा कार्यक्रम अर्थबाटै बनाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भनेका थिए । त्यही भएर अहिले अर्थलाई बजेट वाहेक नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बोझ पनि थपिएको हो । अर्थमन्त्रालय यतिबेला आफैं आगामी वर्षका लागि […]
चुनावलक्षित बजेटमा अर्थमन्त्री
२३ बैशाख २०७९, शुक्रबार ०१:४३ अर्थकोअर्थ
काठमाडौं, २३ वैशाख । अर्थ मन्त्रालयमा हरेक दिन बिहान ७ बजेदेखि साँझ ९ बजेसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन छलफल भइरहेको छ । अर्थले सबै मन्त्रालयका साथै अर्थशास्त्री, उद्योगी व्यवसायीसँग बजेट बनाउन सुझाव लिने काम सकेको छ । कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने र कुन क्षेत्रलाई अघि बढाउने भन्ने विषयमा सरोकारवालाबीच अहिले घनिभूत बहस भइरहेको छ […]
निर्माण कार्य बन्द गर्ने निर्णय कार्टेलिङ भयो : अर्थसचिव मरासिनी
१३ बैशाख २०७९, मंगलवार ०२:४७ अर्थकोअर्थ
काठमाडौं, १३ वैशाख । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको निर्माण कार्य बन्द गर्ने निर्णय कार्टेलिङ भएको बताएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट छलफलमा मरासिनीले व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले जोखिम लिनुपर्ने बताउदै भने यदि जोखिम लिन नसक्ने हो भने जागिर खानुपर्ने बताए । उनले व्यावसायिक संस्था राष्ट्र निर्माणका लागि […]